ကြည့်ရှု့သူများပြားနေတဲ့ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ဖက်ရင်း အနမ်းပေးနေကြတဲ့ ကျော်ထက်အောင် နဲ့ ဖြူဖြူ တို့ရဲ့ ပုံရိပ်များ – Let Pan Daily
ကြည့်ရှု့သူများပြားနေတဲ့ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ဖက်ရင်း အနမ်းပေးနေကြတဲ့ ကျော်ထက်အောင် နဲ့ ဖြူဖြူ တို့ရဲ့ ပုံရိပ်များ
Let Pan | January 31, 2021 | Celebrity | No Comments
ကျော်ထက်အောင်ကတော့ အစီအစဉ် တင်ဆက်သူအဖြစ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိနေသလို ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေမှာလည်း ပါဝင်သရုပ်ဆောင်လျက်ရှိနေကာ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုကိုလည်း အများအပြားရရှိထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အသံသြဇာနဲ့ပြည့်စုံပြီး အနုပညာလမ်းကြောင်းမှာ ဆက်လက်လျှောက်လှမ်းလျက်ရှိနေတဲ့ ကျော်ထက်အောင်ကတော့ ကြွေလောက်စရာကောင်းလွန်းတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကိုလည်း လူမှုကွန်ယက်စာမျက်မှာထက်တင်ပေးလေ့ရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကျော်ထက်အောင်ကတော့ ဖြူဖြူကျော်သိန်းနဲ့ အတူ ရိုက်ကူးထားတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေ ကိုလည်း လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာထက်ကို တင်ပေးလေ့ရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျော်ထက်အောင်နဲ့ ဖြူဖြူကျော်သိန်းတို့ကတော့ ယခုမှာ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ဖက်ရင်း ကြည်ကြည်နူးနူးနဲ့ အားကျစရာကောင်းအောင် ရိုဆန်နေတဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကို ထုတ်ပြလိုက်ပါတယ်။ ကျော်ထက်အောင် နဲ့ ဖြူဖြူကျော်သိန်းတို့ရဲ့ ပျော်ရွှင်ရယ်မောနေကြတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေဟာ ပရိသတ်တွေကို အချစ်တွေပိုစေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကျော်ထက်အောင်ကတော့ ” နာကျင်ချိန် ထွေးပွေ့လို့ထားမယ် အောင်မြင်ချိန်အားယူ လက်များတွဲ. ” ဆိုပြီး ပျော်ရွှင်နေကြတဲ့ ကြည်နူးစရာပုံရိပ်လေးတွေနဲ့အတူ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာထက်မှာ ရေးသားထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် ကျော်ထက်အောင်နဲ့ အဆိုတော်ဖြူဖြူကျော်သိန်းတို့ရဲ့ ကြည်ကြည်နူးနူးနဲ့ ပျော်ရွှင်ရယ်မောနေတဲ့ ရိုမက်တစ်ဆန်ဆန်ပုံရိပ်လေးတွေကိုပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပြီး အဆိုပါပုံရိပ်လေးတွေကို အောက်မှာကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ေက်ာ္ထက္ေအာင္ကေတာ့ အစီအစဥ္ တင္ဆက္သူအျဖစ္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေနသလို ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားႀကီးေတြမွာလည္း ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေနကာ ပရိသတ္ေတြရဲ႕ အားေပးမႈကိုလည္း အမ်ားအျပားရရွိထားတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ အသံၾသဇာနဲ႔ျပည့္စုံၿပီး အႏုပညာလမ္းေၾကာင္းမွာ ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းလ်က္ရွိေနတဲ့ ေက်ာ္ထက္ေအာင္ကေတာ့ ေႂကြေလာက္စရာေကာင္းလြန္းတဲ့ ပုံရိပ္ေလးေတြကိုလည္း လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္မွာထက္တင္ေပးေလ့ရွိေနတာပဲျဖစ္ပါတယ္။
ေက်ာ္ထက္ေအာင္ကေတာ့ ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္းနဲ႔ အတူ ႐ိုက္ကူးထားတဲ့ ပုံရိပ္ေလးေတြ ကိုလည္း လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာထက္ကို တင္ေပးေလ့ရွိေနတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာ္ထက္ေအာင္နဲ႔ ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္းတို႔ကေတာ့ ယခုမွာ တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ဖက္ရင္း ၾကည္ၾကည္ႏူးႏူးနဲ႔ အားက်စရာေကာင္းေအာင္ ႐ိုဆန္ေနတဲ့ပုံရိပ္ေလးေတြကို ထုတ္ျပလိုက္ပါတယ္။ ေက်ာ္ထက္ေအာင္ နဲ႔ ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္းတို႔ရဲ႕ ေပ်ာ္႐ႊင္ရယ္ေမာေနၾကတဲ့ ပုံရိပ္ေလးေတြဟာ ပရိသတ္ေတြကို အခ်စ္ေတြပိုေစခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။
ေက်ာ္ထက္ေအာင္ကေတာ့ ” နာက်င္ခ်ိန္ ေထြးေပြ႕လို႔ထားမယ္ ေအာင္ျမင္ခ်ိန္အားယူ လက္မ်ားတြဲ. ” ဆိုၿပီး ေပ်ာ္႐ႊင္ေနၾကတဲ့ ၾကည္ႏူးစရာပုံရိပ္ေလးေတြနဲ႔အတူ လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာထက္မွာ ေရးသားထားခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ခ်စ္ပရိသတ္ေတြအတြက္ ေက်ာ္ထက္ေအာင္နဲ႔ အဆိုေတာ္ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္းတို႔ရဲ႕ ၾကည္ၾကည္ႏူးႏူးနဲ႔ ေပ်ာ္႐ႊင္ရယ္ေမာေနတဲ့ ႐ိုမက္တစ္ဆန္ဆန္ပုံရိပ္ေလးေတြကိုျပန္လည္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ၿပီး အဆိုပါပုံရိပ္ေလးေတြကို ေအာက္မွာၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။
သိန်း (၁၈၀) ပေးပြီး ဟော်တယ် အတင်းလာခိုင်းတဲ့ အကြောင်း ပြောပြ လာတဲ့ ပတ်ထရစ်ရှာ
အမိုက်စား ဖက်ရှင်လေး နဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကောက် ကြောင်းအလှတွေ ပေါ် လွင်ကာ ဆက်ဆီ ကျလွန်းနေတဲ့ သဇင်ဦး
ဆက္ဆီ က်က် ေရခဲေခ်ာင္းစား ျပလိုက္တဲ့ သဇင္ဦး ရဲ႕ အလန္းစား ဗီဒီယို
သူ႔ရည္းစားကို ပါးေတြ နားေတြ ႐ိုက္တဲ့ သတင္းေပး သူကို မတရားေတြ ထိုးႀကိတ္ေနတဲ့ “စြမ္းဇာနည္” (႐ုပ္သံဖိုင္)